Sishoda ngothisha | News24
BAGCINE bethathiwe abafundi baka-Grade 8 abanga-50 ebesekuphele izinsuku bengafundi ngoba bengasitholi isikhala esikole samabanga aphezulu Emzamweni High School.
Ukungathathwa kwalaba bafundi bekudalwa ukungabi khona kwamagumbi anale kanye nokushoda kothisha nokugcine sekuphoqa uMnyango wezeMfundo ukuba ungenelele.
Lesi sikole esenza kahle kakhulu kwimiphumela kamatikuletsheni sibhekene nenkinga yokuthi asisakwazi ukwamukela ezingane eziningi ezizokwenza u-Grade 8 ngenxa yokungabi khona kwendawo.
Kusukela kuvulwa izikole ngesonto eledlule abafundi baka-Grade 8 abangama-50 bebengqumbelene ngaphandle kwamasango akulesi sikole ngoba bengenazo izikhala zokufunda ngoba kuthiwa sekugcwele esikoleni.
NgoMsombuluko kubanjwe umhlangano wabazali nalapho kade kuzodingidwa khona lolu daba nokugcine ngokuthi kuthiwe laba bafundi abathathwe ngoba sekufike umhloli weSekethe laseSweetwaters uNkk Zandile Sibisi. Kuphinde kwavunyelwana ngokuthi kuzolethwa amagumbi okufundela angomahamba nendlwane ngempelasonto kanti neMeya yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo naye uthembise ukuthi uzokhuluma nongqongqoshe ukuthi kutholakala amanye azothathwa kulezi zikole eseziqediwe ukulungiswa.
UThishanhloko wakulesi sikole uMnu Nhlanhla Ngubane uveze ukuthi isikole sibhekene nenkinga yokuthi asinawo amagumbi anele ukuthi sisangakwazi ukuthi siphinde samukele abanye abafundi kanye nothisha futhi nabo abanele.
“Isikole kumanje sinabafundi abayi-1847 kanti isimo asikho sihle ngoba amagumbi okufundela ayashoda kanto futhi nabothisha bayashoda. Nangonyaka owedlule sibe nenkinga efanayo yabafundi abagcina sebehlala ngaphandle kwesikole ngoba bengazitholanga izikhala ngenxa yokuthi kugcwele saze sasizwa ezinye sezikole ezingomakhalwane kodwa naso kulonyaka sinenkinga yokuthi sigcwele.
“Sidinga othisha abali-15 kodwa uMnyango wezeMfundo wona uthi uzosinikeza othisha abayi-5 kuphela. Sishoda ngabagumbi angama-24 kodwa futhi uMnyango wona uthi uzosinikeza amane kuphela nokugasisizi ngalutho ke thina,” kubeka yena.
UMnu Ngubane uveze ukuthi sekukaningi bebhalela uMnyango wezeMfundo ubazisa ngezinkinga ababhekene nazo kodwa kuze kube imanje akukho okutheni okwenzakalayo.
Kulo mhlangano kuphinde kwavela ukuthi kumanje kunabafundi abafunda bemile ngenxa yokungabikhona
Abazali bazwakalise ukukhathazeka kwabo baze baveza nokuthi uma abantwana babo benganikezwa izikhala bangazama nabo ukuxhasa ngezitulo abazohlala kuzo ngoba bayasala ezifundweni njengoba bengafundi.
UMnu Bheki Nkabini nonguSihlalo weSigungu esimele abazali kulesi sikole uthe kuyabajabulisa ukuthi ekugceneni uMnyango ugcine uzamile ukubalekelela.
“Nakuba sekuphele iminyaka sizama ukuyilwa lendaba siyajabula ukuthi ekugcinenei sebeyayisukumela.Siyazi ukuthi nalagumbi abathi bazosinikeza wona awesikhashana kodwa nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nesikole esakhiwe kahle sanwetshwa. Lesi ngesinye sezikole ezenza kahle kakhulu kumele uMnyango engabe uyasisukumela usinake.” UNkk Sibisi uthe bayalubona usizi olubheke nabazali ingako belusukumele phezulu lolu daba .
“Azikho izingane ekumele zihlale emakhaya zingafundi ngoba kuthiwa azinayo indawo. Udaba lothisha lona besisathole abayi-5 nje kuphela okwamanje,” kubeka yena.